श्रीमानबाटै कुटिइन् निर्मलाकी आमा, श्रीमान् र सौताबाट मैले जिन्दगीभर पीडा खेप्नुपर्ने ? - Dainik Nepal
श्रीमानबाटै कुटिइन् निर्मलाकी आमा, श्रीमान् र सौताबाट मैले जिन्दगीभर पीडा खेप्नुपर्ने ?
दैनिक नेपाल २०७५ पुष २७ गते ७:५४
काठमाडौं, २७ पुस । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्त श्रीमान् यज्ञराजबाटै कुटिएकी छिन् । डिएनए परीक्षणका लागि प्रहरीलाई रगत दिएको र सरकारी राहत लिन खोजेको भन्दै श्रीमान्ले कुटेको दुर्गाले बताइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छपोको छ ।